तपाईँले टाइपको रूपमा स्वचालित तवरले त्रुटिहरू सुधार गर्दाका लागि विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि ठीक छक्लिक गर्नुहोस् ।
When you choose to modify existing text with all options deselected, still all "Default" paragraph styles will be converted to "Text body" styles.
प्रतिस्थापन तालिका प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईँले अक्षर संयोजन टाइप गर्नु भयो भने जसले प्रतिस्थापन तालिका, यो संयोजन पाठ सहित प्रतिस्थापन हुन्छ।
TWo INitial CApitals सुधार गर्नुहोस्
यदि तपाईँले एउटा "WOrd" को सुरुमा दुइवटा ठुला अक्षरहरू टाइप गर्नुहुन्छ भने, दोस्रो ठूलो वर्ण स्वचालित रूपमा सानो वर्णद्वारा प्रतिस्थापन हुन्छ ।
प्रत्येक वाक्यको पहिलो अक्षर ठूलो लेख्नुहोस्
प्रत्येक वाक्यको पहिलो अक्षर ठूलो गर्छ ।
तपाईँले एउटा URL टाइप गर्दा स्वचालित रूपमा एउटा हाइपरलिङ्क सिर्जना गर्दछ ।
Text will be replaced after you typeatrailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits0to 9.
अनुच्छेदको सुरु र अन्त्यमा खाली स्थानहरू र ट्याबहरू मेट्नुहोस् ।
अनुच्छेदको सुरु र अन्त्यको खाली स्थानहरू र ट्याबहरू हटाउँछ. यो विकल्प प्रयोग गर्न, शैलीहरू लागू गर्नुहोस् विकल्प पनि चयन गरिनुपर्दछ ।
रेखाहरूको सुरु र अन्त्यको रिक्तहरू र ट्याबहरू मेट्नुहोस् ।
प्रत्येक रेखाको सुरुको खाली स्थानहरू र ट्याबहरू हटाउँदछ. यो विकल्प प्रयोग गर्न, शैलीहरू लागू गर्नुहोस् विकल्प पनि चयन गरिनुपर्दछ ।
डबल खाली स्थानहरू वेवास्ता गर्नुहोस्
एउटा एकल खाली स्थान सहित दुई वा धेरै क्रमाङ्कन खाली स्थानहरू बदल्छ ।
शैलीहरू लागू गर्नुहोस्
एउटा अवधि, एउटा खाली स्थान, र पाठद्वारा अनुशरण गरिएको एउटा सङ्ख्याबाट सुरु हुने एउटा रेखाको अन्त्यमा तपाईँले इन्टर थिच्दा एउटा क्रमांकित सूची सिर्जना गर्दछ । यदि एउटा खाली स्थान, र पाठद्वारा अनुशरण गरिएको एउटा रेखा एउटा योजक चिन्ह (-), एउटा जोड चिन्ह (+), वा एउटा एस्टेरिस्क (*) बाट सुरु हुन्छ भने, तपाईँले इन्टर थिच्दा एउटा गोलीचिन्ह गरिएको सूची सिर्जना हुन्छ ।
एउटा क्रमाङकन प्रतीकद्वारा सुरु हुने एउटा रेखाको अन्त्यमा तपाईँले इन्टर थिच्दा स्वचालित क्रमाङकन रद्द गर्न, फेरि इन्टर थिच्नुहोस् ।
किनारा लागू गर्नुहोस्
चयन गरिएको रेखा मेटाउन, रेखा माथि अनुच्छेद क्लिक गर्नुहोस् ढाँचा - अनुच्छेद - किनाराहरूरोज्नुहोस्, किनारा बटन मेट्नुहोस् ।
बिभिन्न क्यारेक्टरहरूका लागि निम्न तालिका रेखा बाक्लो पार्न सारांश गर्छ:
0.5pt एकल कच
1.0pt एकल कच
1.1pt डबल कच
4.5pt डबल कच
6.0pt डबल कच
9.0pt डबल कच
पाठ भित्र चित्र लाइनहरू
तालिका सिर्जना गर्नुहोस्
तालिका सिर्जना गर्छ जब तपाईँ धनात्मक चिन्हद्वारा छुट्याइएको हाफनहरू (-) वा ट्याबहरूको शृङ्खला टाइप गरिसके पाछि Enter थिच्नुहोस् जुन +------+---+हो । धनात्मक चिन्हहरू स्तम्भ बिभाजकद्वारा तोकिन्छ जतिबेला स्तम्भको चौडाइमा योजक चिन्ह राख्नेकाम र ट्याबहरू तोकिन्छ ।
शीर्षक १ देखि शीर्षक ८ अनुच्छेद शैलीहरू सँग "Default" अनुच्छेद शैली स्वचालित रूपमा प्रतिस्थापन गर्दछ. शीर्षक १ अनुच्छेद शैली लागू गर्न, तपाईँले एउटा शीर्षक (एउटा अवधि बिनाको) को रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको पाठ टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि इन्टर दुइपटक थिच्नुहोस्. एउटा उप-शीर्षक लागू गर्न, एक वा बढी पटक ट्याब थिच्नुहोस्, पाठ (एउटा अवधि बिनाको) टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि इन्टर थिच्नुहोस् ।
खाली अनुच्छेदहरू हटाउनुहोस्
ग्राहक शैली बदल्नुहोस्
हालको कागजातमा अनुकूल अनुच्छेद शैलीहरू "पूर्वनिर्धारित", "पाठको मुख्य भाग", वा "पाठको मुख्य भाग इन्डेन्ट" अनुच्छेद शैली सँग प्रतिस्थापन गर्दछ ।
सँग गोलीचिन्हहरू प्रतिस्थापन गर्नुहोस्
गोली चिन्ह गरिएको सूचीमा, एउटा खाली स्थान वा ट्याबद्वारा सीधै अनुशरण हुने एउटा योजक चिन्ह (-), एउटा जोड चिन्ह (+), वा एउटा एस्टेरिस्क (*) सँग सुरु हुने अनुच्छेदहरू रूपान्तरण गर्दछ. यो विकल्पले ती अनुच्छेदहरूमा मात्र काम गर्दछ जुन "पूर्वनिर्धारित", "पाठ मुख्य भाग", वा "पाठ मुख्य भाग इन्डेन्ट" अनुच्छेद शैलीहरूद्वारा ढाँचा गरिएको हुन्छ. प्रयोग गरिएको गोलीचिन्ह परिवर्तन गर्न, यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि सम्पादन गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् ।
क्रमागत एकल-रेखा अनुच्छेदहरूलाई एउटा एकल अनुच्छेदमा संयोजन गर्दछ । यो विकल्पले ती अनुच्छेदहरूमा मात्र काम गर्दछ जसले "पूर्वनिर्धारित" अनुच्छेद शैली प्रयोग गर्दछ. यदि एउटा अनुच्छेद निर्दिष्ट लम्बाइ मान भन्दा लामो छ भने, सो अनुच्छेद पछिल्लो अनुच्छेद सँग संयोजित हुन्छ. एउटा भिन्न लम्बाइ मान प्रविष्ट गर्नुहोस्, र त्यसपछि Edit मा क्लिक गर्नुहोस् ।
चयन गरिएको स्वत: सुधार विकल्प परिमार्जन गर्छ ।